Mid kamid ah Jilayaasha ugu caansan ee jila Filimaanta Dalka Hindiga oo is dishay (Daawo Sawirkeeda) | Salaan Media
Mid kamid ah Jilayaasha ugu caansan ee jila Filimaanta Dalka Hindiga oo is dishay (Daawo Sawirkeeda)
jiah Khan oo kamid ah haweenka jilayaasha ah ee sida weyn loogu yaqaan filimaanta Hindiga ayaa la xaqiijiyey in xalay (Isniin) laga helay meydkeeda gurigooda ku yaal magaalada Mumbai ee dalka Hindiya (India).
Jiah Khan oo magaceeda runta ah yahay (Nafisa Khan) ayaa la sheegay in ay is dal-dalshay, sida ay xaqiijiyeen Booliiska magaalada Mumbai. Meydka atariishadan ayaa la sheegay inay heshay Hooyadii dhashay.
“…Hooyadeed iyo walaasheed ayaa helay meydkeeda Nafisa Khan, kadib markii ay guriga tageen xalay 11kii fiidnimo…” ayaa lagu yiri warbixinta Booliiska.
Jiah Khan ayaa ahayd 25 sano jir, waxaana geerideeda si weyn uga naxay Jiliyaasha filimaanta Hindida ugu caansan iyo shacabka dalka Hindiya. Waxaa kamid ah dadka sida weyn uga naxay Atoorihii ay wada dhigeen filmikeedii ugu horeeyay Jilaaga Amitabh Bachchan oo ay Somalidu u taqaan (Cali-Dheere).
Haweenaydan ayaa kusoo kortay dalka Ingiriiska, illaa iyo hadana lama yaqaan waxa sababay inay is dal-dalsho, booliiska ayaa sheegay inay baadhitaan ku wadaan geerida haweenaydan.